Mankalaza ny faha-25 taona ahafahan'ny fivezivezena sy ny fiainana mitaiza | Kalpar Castors
Manorena ny anao manokana
Home / Blog / Kalpar Castors ho fahatsiarovana ny vanim-potoana lehibe: mankalaza ny 25 taona nahafahan'ny fivezivezena sy ny fiainana nitaiza
Kalpar Castors ho fahatsiarovana ny vanim-potoana lehibe: mankalaza ny 25 taona nahafahan'ny fivezivezena sy ny fiainana nitaiza
Posted on Janoary 18, 2021 Enga anie 11, 2021
Kalpar Castors dia nanambara ny fankalazana ny Jobily Silver, nanambara sary miavaka iray ho fahatsiarovana ny fotoana, manohy mamaky hahalala bebe kokoa.
Efa ho 6500 taona lasa izay, ny olombelona dia nifanena tamin'ny famoronana manan-danja indrindra tamin'ny fotoana rehetra - NY WHEEL. Hatramin'izao, dia manohy manohana ny hetahetan'ny olombelona amin'ny fitomboana sy fampandrosoana. Niorina tamin'ny 1995 ary niorina tamin'ny fotokevitra avo lenta momba ny kalitao, Kalpar Castors dia manohy ny fandraisana anjaran'ny kodiarana hanomezana hery ny ain'ny olombelona. Kalpar dia manamboatra castors sy kodiarana avo lenta izay manome lanja ireo vokatra an-jatony miparitaka amina sehatra indostrialy marobe - manomboka amin'ny mediterare ka hatrany amin'ny fiara ary hatrany amin'ny valizy ka hatrany amin'ny entan'ny rivotra.
Hatramin'ny 25 taona, Kalpar Castors dia manolo-tena amin'ny famoronana vokatra mihoatra ny andrasan'ny injeniera sy ny manavao, amin'izay manamora ny fivoarana vaovao. Androany sy isan'andro, i Kalpar Castors dia mirehareha amin'ny fitarihana an'izao tontolo izao mankany amin'ny fandrosoana sy ny fanavaozana. Izany rehetra izany dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fahatokisan-tenan'ny mpanjifanay sy ny faharesen-dahatra tsy azo lavina an'ny ekipanay. Ny sary famantarana '25 taona fankalazana' dia fisehoan'ity dia misy dikany ity.
Kalpar nivadika 25 taona: ny sary famantarana.
Amin'ny maha izy azy, ny kodiarana dia mampihena ny fifandirana eo amin'ny zavatra roa. Raha atao teny hafa, manatsara ny valin'ny ezaka ataon'ny olombelona izy io. Ho anay ao amin'ny Kalpar Castors, ny endrika 'boribory' ny vokatray dia aingam-panahy hatrany. Mampatsiahy antsika ny tena fototr'asa - ny fanamorana ny fivezivezena - izay ilain'ny vokatra. Noho izany, ny isa dia noforonina avy amin'ny boribory, maneho ny faribolana sy ny castors. Ny loko mena tokana dia milaza ny tsy fitovizan'ny orinasa sy ny fahaizany manatsara kalitao. Ny swooshes dia fanehoana ireo toetra telo an'ny matanjaka, matanjaka ary azo antoka - izay manohy mitarika ny hatsaran'ny famokarana Kalpar Castors. Izy ireo koa dia manome dinamika amin'ny sary, milaza izany ho dingana lehibe amin'ny dia mitohy. Ny kintana dia maneho ny fankalazana ny 'jobily volafotsy', ary izy ireo dia maneho ny fitsipiky ny fahamboniana 5 an'i Kalpar Castor dia ny - Tanjona, fahamendrehana, fandrosoana, fampiononana ny mpampiasa ary ny fahaizany mamaha olana.
Mampandeha mivezivezy, mamelona fiainana.
Ny dian'i Kalpar Castor dia nanomboka tamin'ny 1995 niaraka tamin'ny volavolan-kodiarana kodiarana roa tamina toerana kely latsaka ny 2000 sq.ft. Manomboka amin'ity fiandohana am-panetren-tena ity, Kalpar ankehitriny dia manamboatra karazana castor mihoatra ny 650+, izay amboarina amina fotodrafitrasa roa manara-penitra efa ho 50,000 sq.ft. Tany am-piandohan'ny taona niforonany dia nanatri-maso ny filàn'ny vahaolana azo itokisana manerana ny faritra indostrialy i Kalpar. Manomboka amin'ny indostrian'ny lamba, Kalpar dia nifantoka tamin'ny fanaovana kodiarana castor izay manome hetsika miadana sy tsy misy fijanonana amin'ny fikirakirana fitaovana sy fitaovana fikirakirana sliver. Ny fahombiazana tamin'ity sehatra ity dia nitarika ny ekipan'i Kalpar hijery indostria maro karazana toa vata fampangatsiahana, valizy, elektronika, fivarotana antsinjarany, fiara sy ny hafa. Ny tsirairay amin'ireo indostria ireo dia samy nanana ny fitakiany, ary Kalpar dia nanolotra vahaolana matanjaka sy matanjaka ary azo antoka ho an'ity orinasa ity sy ireo orinasa maro hafa. Ny fividianana lanjan'i Kalpar Castor tsy miova amin'ny fitaovan'ny OEM dia nahazo fanekena malalaka, ary manokatra varavarana mankamin'ny indostria mitsikera sy henjana toa ny fanafody sy entana-rivotra. Kalpar dia nandray anjara mavitrika tamin'ny filàna misongadina amin'ireo indostria rehetra ireo, nanome vahaolana mavitrika izay nampiroborobo ny mpanjifan'izy ireo. Tsara homarihina dia ny famatsiana castor manan-danja an'i Kalpar ho an'ny fitaovana mamonjy aina kritika toa ny Ventilators nandritra ny areti-mandringana manerantany. Amin'ny ankapobeny, ny Kalpar Castors, miaraka amin'ny fehezam-boninkazo misy kalitao avo lenta, dia manome lanja ny fikasan'ny mpanamboatra fitaovana an-jatony ho an'ny vahaolana azo itokisana indrindra.
Tahaka ny fotoana hankalazana ny tombam-bidy taloha, dia manararaotra fotoana manararaotra izahay hanambarana ny fisian'ny vanim-potoana vaovao amin'ny vahaolana amin'ny fivezivezena. Ao Kalpar, gaga izahay amin'ny zavatra hitranga amin'ny ho avy sy ny gamut ny fahafaha-mamoaka izany. Izao tontolo izao, toy ny mahazatra, dia manova, misy fiatraikany amin'ny fomba fiasa sy fiainantsika, ka misy fiantraikany amin'ny laharam-pahamehantsika izany. Ireo dia misy ifandraisany amin'ny karazana milina & karazana fitaovana hampiasain'izao tontolo izao.
Maniry ny hanokana fotoana kely izahay hanehoana ny fankasitrahanay ny fahatokisana sy ny finoana ananan'ny mpanjifanay amin'ny fahaizanay. Ny mpikambana ao amin'ny ekipanay dia miaina amin'ny fitsipiky ny orinasa momba ny kalitao sy ny hatsarana; ny faharesen-dahatr'izy ireo tsy manam-petra no mahatonga ny fandrosoan'ny Kalpar Castors. Manaja lalina ny fifandraisanay izahay; mitazona antsika hanana fitarihana sy antony manosika antsika hahatratra ambaratonga ambony kokoa izany.
Miaraha aminay rehefa mankalaza ny faha-25 taona ahafahan'ny fivezivezena sy fiainana mitaiza izahay.
Castors sy Wheels hamaly ny filan'ny indostria isan-karazany